Izizathu zokuthi kungani sithanda umatilasi wasentwasahlobo | Rayson
Izizathu zokuthi kungani sithanda umatilasi wasentwasahlobo
Ikakhulu, amadolobha amakhulu emhlabeni abhekene nezinkinga ngezakhiwo ezihlanzekile. Le nkinga ihlobene kakhulu nesakhiwo sengilazi nezinkinga zenhlalo, ngoba abantu abaningi bayafa lapho behlanza izakhiwo minyaka yonke. Ngokuya ngomjikelezo wempilo wesakhiwo noma isakhiwo, ukunakwa okwengeziwe kufanele kukhokhwe kwi-purts acction. Isakhiwo sengilazi singaba nobungani obuningi futhi banesibopho.
Isifunda seVoltage phakathi kwebhethri kanye ne-generator ekhulisa amavoluka emoto ngenhla kwebhethri kagesi. Iphakethe le-batter lisanikeza ama-21 kW, kepha lincane (lokho kusho ukuthi adala ubuningi bamandla obuphezulu) izindleko zokukhiqiza eziphansi. Enye yezinhloso ze-PRIS ingumunyu ophansi (walinganiselwa njenge-sulev yiKhomishini Yezinsiza ZaseCalifornia (